कांग्रेस बैठक:देउबाले लिएनन चुनाब हारको जिम्मा ,बैठकका लागि पुगेका नेताहरु दिनभर गफ गरेर फर्किए » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कांग्रेस बैठक:देउबाले लिएनन चुनाब हारको जिम्मा ,बैठकका लागि पुगेका नेताहरु दिनभर गफ गरेर फर्किए
आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:१८ मा प्रकाशित !
नेपाली कांग्रेसमा चुनाव हारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादले चर्को रुप लिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच दिनभर भएको सहमति प्रयास सफल हुन सकेन र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ ।
बैठकका लागि विहान ९ बजे नै पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका नेताहरु दिनभर कुरेर साँझ ७ बजेतिर फर्किएका छन् । दिनभर केही नेता सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै छलफलमा जुटेका थिए भने अरु गफ गरेर बसेका थिए ।
शनिबारको बैठकमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले चुनावी समिक्षा र आगामी कार्यक्रमसहित लिखित प्रस्ताव पेश गर्ने र सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलेर चुनावी समिक्षा बैठक सक्ने तयारी थियो ।
महामन्त्रीको प्रतिवेदन बनाउन शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलका नेताहरुले सहयोग गरेका थिए । तर, चुनावी हारको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा देउवा र रामचन्द्र पौडेल समूहबीच सहमति हुन सकेन ।
‘चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ । अरुले पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार लिन्छन् भन्यौं । तर, सभापतिले मान्नु भएन’ छलफलमा सहभागी पौडेल समूहका एक नेताले भने ।
एमाले र माओवादी मिलेका कारण मात्र कांग्रेसले चुनाव हारेको देउवा पक्षको तर्क छ ।
स्रोचका अनुसार मध्यमार्गी नेताहरुले तयार पारेको प्रस्तावमा कांग्रेसले आफ्ना राम्रा कामहरुको पनि प्रचार गर्न सकेको भए, सरकारका कतिपय अनुपयुक्त निर्णयहरु नगरेको भए यो भन्दा राम्रो परीणाम प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने भाषा राखिएको छ ।
भोलि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्ने र त्यस आधारमा प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास भइरहेको छ । पौडेलसहितका शीर्ष नेताहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अवस्था अाउने नदिने देउवा पक्षको रणनीति छ ।
देउवा र पौडेल समूहबीच महासमिति बैठकको मितिबारेनि सहमति जुटेको छैन । देउवा समूहले साउन अन्तिम वा भदौंमा गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् तर, अरुले जेठ अन्तिममा गर्न माग गरेका छन् ।
सहमतिको प्रयास लम्बिएपछि युवा नेताहरुले चुनावी समिक्षाको प्रस्ताव पार्टी सभापतिले नै ल्याउने र त्यसमा सहमत नहुनेहरु आफ्नो राख्ने विकल्प पनि दिएका थिए । तर, न सहमति जुट्यो न युवा नेताहरुको विकल्पमा नै जान तयार भएका छन् ।
बैठक आइतबार विहान ११ बजे बस्नेछ । त्यसअघि सहमतिको प्रयास जारी रहने नेताहरु बताउँछन् ।
PREVIOUS POST Previous post: आजको दिन तपाईको लागि कस्तो छ हेर्नुस, आजको राशिफल
NEXT POST Next post: अधिकांश बैङ्कले नाफा बढाए पनि प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट, कसको कति छ ?
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:१८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:१८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:१८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:१८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:१८